I-coluracetam powder (135463-81-9) hplc =98% | AASraw iNootropics powder
/ iimveliso / I-Nootropics powder / IColuracetam powder
SKU: 135463-81-9. Udidi: I-Nootropics powder
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-mass order yeColuracetam powder (135463-81-9), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-coluracetam powder lilungu leqela elibanzi lamayeza e-racetam. Ngokuqhelekileyo kubanjelwa ukuba imemori yayo ikhulise iipropati kwakunye nemiphumo emihle ekudakaleni komntu kunye nokuxhalabisa. Nangona i-coluracetam powder ixhomekeke kakhulu kule mivuzo, kuye kwaxelwa ukuba kuphuculwe iimpawu ze-optic nakuba kukho izifundo eziqhubekayo ezifunekayo ukuchonga iindlela ezichanekileyo ezivela kule nzuzo.
Ividiyo yeColuracetam powder
I-Raw Coluracetam powder ezisemqoka
igama: I-coluracetam powder
I-molecular Formula: C19H23N3O3
Isisindo somzimba: 341.4
Umphunga weRaw Coluracetam kwi-SMART umjikelo weziyobisi
I-coluracetam powder (MKC-231) isichengululo se-racetam esicelwa ukuba sisisigxina sokwenza inkqubela. Iyakwazi ukulondoloza i-choline ekufakeni i-neurons xa ingenakukhubazeka, kodwa okwangoku akukho ubungqina beempembelelo ze-nootropic.
Ukusetyenziswa kwePowder Coluracetam
Uphando lwezilwanyana kwi-Coluracetam powder lisebenzisa umthamo womlomo we-300-3,000mcg / kg umzimba we-bodyweight, oguqulelwe ngokukwiqondo lomntu we-48-480mcg / kg okanye (kumntu we-150lb) 3.2-32.7mg ngokubanzi.
Kubonakala ngathi i-kinetics ngokukhawuleza, inophawu kwigazi malunga nemizuzu ye-30 kunye nokuhla kweeyure kwi-3 iiyure. Ngenxa yoko, ukuxhaswa kunokuxhomekeka kwixesha ngokumalunga nomsebenzi.
Ziziphi iintlobo zeMiphumo okufanele ndiyilindele kwi-Raw Coluracetam powder
I powdercetam powder iboniswa ukuphucula umsebenzi wokuqonda kunye nememori kwiirath, kwaye kwinqanaba, iziphumo ezifanayo zilindeleke kubantu. Uphando oluqhutywe yiBrainCells Inc lubonise ukuphuculwa kweememori kwiekiti ezazinikwa i-AF64A (i-neurotoxin ethile ye-neuron) iintsuku ezisibhozo kunye ne-Coluracetam powder eluhlaza kwi-3 mg i-doses. Baye bafaka umgangatho we-Morris Water Maze ukubeka uphawu lwabo ukukwazi ukufikelela kuyo, kwaye kwaneeyure ukuya kwii-72 iiyure emva kokugqibela kwe-8 mg dose, bebanako ukukwazi. Olunye uphando oluphambili lwale sifundo kukuba iziphumo zazingabonakali iintsuku ezintathu emva komthamo wokugqibela, nangona i-concentration ye-serum yeColuracetam powder yayingenakunceda.
I-BrainCells Inc. yafumanisa ukuba umlinganiselo we-240 mg (ukwahlula kwiingxaki ezintathu zemihla ngemihla ye-80 mg) wawuncedo ekuphatheni ukudakumba okukhulu kunye ne-GAD edibeneyo (i-disorder disorder disorder). Nangona kunjalo, ulwahluko lwaye lwabhengezwa kakhulu kulabo abangazange bafumane ukukhulula ekusebenziseni izidandathelwano eziqhelekileyo. Emva kwesinye idosi, kwakungekho nantlukwano ebonakalayo, kodwa emva kweesisombululo ezimbini ze-80 mg, i-36% yaphucula amanqaku ngexesha lokuvavanya ukuvavanya.
I-powuracetam powder idibaniswe neenzuzo ze-optic ezifana nombono ogqityiweyo wombala, ukuqaphela kunye nokucaca. Nangona kungekho bu bungqina obucacileyo bokuxhasa iinkqubo ezivela kule nzuzo, iingcali zikholelwa ukuba i-Coluracetam powder isebenza kwinxalenye yengqondo eqhuba iinkqubo ezibonakalayo.
Isilumkiso kwi-Raw Coluracetam powder
I-Coluracetam powder eluhlaza (MKC-231) isichengechunge se-racetam esicelwa ukuba sibe yi-nootropic compound. Awunalo ubungqina obuninzi bokuphanda, kodwa iindlela zokusebenza (kunye nesakhiwo) zibonakala zihluke kakhulu kwezinye i-racetam ezinjengePiracetam okanye i-Aniracetam.
I-coluracetam powder ibonakala isebenzisana nenkqubo eyaziwa ngokuba yintsebenziswano ephezulu ye-coline (i-HACU efutshane), eyona nqanaba lokunciphisa isantya lokudweba kwi-neuron ukuze ihlanganiswe kwi-neurotransmitter acetylcholine. Ukwandisa izinga le-HACU kubonakala kwandisa umsebenzi we-nelinon cholinergic, ngoko kukujoliswe ekujoliseni ukuphuculwa kwengqondo.
Amanyathelo angene kwiigos (njengoko kungekho bungqina bokuba okwangoku) ukuxhasa ukusetyenziswa kwe-Coluracetam powder eluhlaza kwizilwanyana zomlomo eziphantsi kakhulu ukugcina i-HACU enokungaphumeleli ngokusetyenziswa kweziyobisi zophando ezaziwa ngokuba ziphazamise i-HACU. Ububungqina obunqamlekileyo obujonge kwiimpembelelo ze-Coluracetam powder kwi-HACU ye-neurons evamile ayiphumelelanga ukufumana intsebenziswano ebalulekileyo.
I-Coluracetam powder eluhlaza iye yaqatshelwa ukuba idibanise ne-choline abathuthayo ngokomzimba, kodwa ayengaziwa ngokuqinisekileyo oko yenzayo kanye.
Ngokubanzi, kukho ubungqina obaneleyo bokuxhasa ukusetyenziswa kwe-Coluracetam powder ukwenzela ukuphuculwa kwengqondo. Izifundo ezongezelelweyo zifunekayo ukubona ukuba unendima yokuthintela kwiimeko apho i-HACU inokukhubazeka (njenge-Alzheimer's disease).
Njengama-racetam amaninzi, i-Coluracetam ipowder eluhlaza yandisa i-choline, kodwa iyakwandisa ukwandisa kwi-neurons eyonakalisiweyo. Ngokukodwa, i-Coluracetam powder ixubene nenkqubo ye-HACU, enoxanduva lokumisa i-choline kwi-neurons. Olu phuhliso lwakhula lwenzeka ngexesha leprojekthi ye-acetylcholine synthesis synthesis process.
Ekubeni i-Coluracetam powder iphucula ukulondolozwa kwe-choline ngeli xesha, inani elikhulu liguqulwa libe yi-acetylcholine. Le nkqubo ibangela ukukhunjulwa kwememori, ingqwalasela kunye nokuqapha. Kubalulekile ukuqaphela apha, ukuba ezi zibonelelo zibonwa kuphela kwizifundo ezine-neurons ezingaphili kakuhle ngaphambili, kungekho kwizifundo eziqhelekileyo ezisebenza nge-neurons.
I-Coluracetam powder eluhlaza iboniswa kwakhona ekuphuculeni ukuxhotyiswa kwe-AMPA, leyo yinkqubo eyenza umsebenzi wokuqonda kunye nokuqapha.
Nangona i-Coluracetam powder idibanisa nabathungisi be-choline ngokunjalo, akukho nto yokuchaza ukuba kutheni ukusebenzisana kwenzeka okanye kwenzeka ntoni emva kokusebenzisana.
I-Raw Coluracetam yePowder Marketing
Ngaba i-Raw Coluracetam ipowder inayo nayiphi na imiphumo yangaphandle
Ukusetyenziswa kwe-coluracetam powder kuphephe kakhulu kunye nemiphumo embalwa yecala. Impembelelo yecala echaphazelekayo enokuthi ihlangane nayo yintloko. Le nto ingahlawulwa ngokugqithisa i-Coluracetam powder ngeCroprophenoxine, i-Alpha GPC okanye i-CDP Choline ukunciphisa imiphumo enjalo. Nangona kunjalo, ukuba uceba ukuthenga i-Coluracetam powder eluhlaza, cela umyalelo wakho wokunika inkampani imiyalelo engakumbi malunga nendlela yokubeka i-Coluracetam powder.
Indlela yokuthenga i-Coluracetam powder esuka kwi-AASraw
I-Coluracetam Raw Powder Recipes